कांग्रेस नेतृत्व ‘पदाधिकारी’ मुद्दामा अल्झियो, कार्यकर्ता चिन्तित ! - कांग्रेस नेतृत्व ‘पदाधिकारी’ मुद्दामा अल्झियो, कार्यकर्ता चिन्तित !
कांग्रेस नेतृत्व ‘पदाधिकारी’ मुद्दामा अल्झियो, कार्यकर्ता चिन्तित !
२०७५, २ पुष, 10:44:44 PM
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसको जारी महासमिति बैठकका सहभागीहरुले पार्टीको विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको विषयलाई लिएर विवादमा नअल्झिन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
महासमिति बैठकको तेस्रो दिनसमेत विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाको विवादले प्रतिवेदन पेश हुन सकेको छैन ।
महासमिति सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा सहमति कायम गरी शिघ्र बैठकमा पेश हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । काङ्ग्रेस विधान मस्यौदामा पदाधिकारी सङ्ख्या र पदाधिकारीको चयन प्रक्रियाबारे बहस जारी छ । संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ ।
विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने भएपछि महासमिति बैठक झण्डै तीन घण्टा स्थगन गरिएको थियो ।
तर पार्टी शीर्ष नेतृत्वबीच उक्त विषयमा कुनै सहमति नभएपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकेन । यस अघि गत मङ्सिर १३ देखि २२ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधान मस्यौदाबारेमा छलफल भएको थियो ।
आजको महासमिति बैठकपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने र विधान मस्यौदाको प्रतिवेदन पारित गरी भोली पेश हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
कैलालीका महासमिति सदस्य नारायणदत्त मिश्रले नेतृत्वलाई ‘पदाधिकारी सङ्ख्या जति बनाएपनि बनाउनुस्’ तर पार्टीलाई निकास दिइ एक ढिक्का र बलियो बनाउन आग्रह गरे ।
महासमिति सदस्यलाई जिल्लामा काम गर्ने भूमिका दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
चितवनका महासमिति सदस्य टेकप्रसाद गुरुङले सबै नेता वडास्तरबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नेतृत्वले सबै कार्यकर्तालाई समान रुपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
सुनसरीका महासमिति सदस्य हाजी अब्दुल रहिमले तेस्रो दिनसम्म पनि विधान मस्यौदा प्रतिवेदन बैठकमा पेश नभएको गुनासो गर्दै पदाधिकारी सङ्ख्या जति राखेपनि चाँडो सहमति गर्न नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
अभियानमा हालसम्म करीब ७०० महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेको सो अभियानका अभियन्ता दिवस ढुंगेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा पनि महासमिति सदस्यबाट काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डामा छलफल गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ । डोल्पाका महासमिति सदस्य देवीकृष्ण न्यौपानेले ८१ प्रतिशत हिन्दू धर्मालम्बी भएको मुलुकको संविधानमा धर्म निरपेक्ष भनी उल्लेख गर्नु उचित नभएको तर्क गर्दै महासमिति बैठकमा यस विषयले छलफलका लागि स्थान पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
बाराका महासमिति सदस्य मदन मण्डलले पार्टीमा गुटउपगुटको अन्त्य गर्न नेतृत्वको नियत परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । बाँकेका महासमिति सदस्य निरञ्जन सिजापतिले हिन्दू राष्ट्रलाई छोडेर मुलुक धर्म निरपेक्षतामा जानु उचित नभएको टिप्पणी गरे ।
झापाका भरतेन्दु मल्लिकले विधान मस्यौदा प्रतिवेदन बैठकमा छिटो पेश गरे मात्र आवश्यक छलफल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । सर्लाहीका महासमिति सदस्य कल्पना माया पाख्रिनले जनसङ्ख्याअनुसार पार्टीका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुने व्यवस्था गर्न माग गरे।
इलामका महासमिति सदस्य विष्णु दाहालले नेतृत्वबाट कार्यकर्तालाई समान व्यवहार नहँुदा पार्टीले निर्वाचनमा हार व्योहोर्नुपरेको बताए ।
रामेछापका महासमिति सदस्य लक्ष्मण बस्नेतले संविधानमा हिन्दू राष्ट्रको स्थानमा धर्म निरपेक्षता षडयन्त्रपूर्वक आएको उल्लेख गर्दै यसमा पुनःविचार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
पार्टीको महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय महासमिति बैठकमा खास गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी नेतृत्वको कमजोरीका कारण पार्टीले हार व्यहोर्नुपरेको भन्दै सहभागीले गुटउपगुट अन्त्य गरी पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सुझाव दिएका छन ।
कांग्रेसमा फेरी बल्झियो ‘पदाधिकारी’ विवाद, उल्टियो सहमति !
‘पार्टीमा गुट उपगुट र भागबण्डा अन्त्य गर्न सुझाव’
कांग्रेस पदाधिकारी : कोषाध्यक्ष बाहेक सबैले चुनाव जित्नुपर्ने !